Nagarik Shukrabar - पाइला पाइलामा पर्यटक
बुधबार, १० मङि्सर २०७७, ०८ : १५
सोमबार, ०४ कार्तिक २०७६, १२ : ३४ | मनोज घर्तीमगर
नौ वटा ताल नै छन्। नेपालमा मात्र हैन विश्वमै प्रसिद्ध रहेको फेवाताल अनि तालको बीचमै रहेको तालबाराही मन्दिरले धेरैको ध्यान तानेको छ। मौसम खुलेको बेला अहिले हिउँ खेल्न जाउँजस्तो लाग्ने गरी देखिन्छन्, हिमाल। सफा अनि फराकिलो बाटो। हेरिरहुँ लाग्ने डेभिज फल्स अर्थात् पातले छाङ्गोले घुमन्तेको मन तानेकै छ।
भित्री संसारमै रमाउन चाहनेहरुका लागि पोखरामा तीनवटा त गुफा नै छन्। महेन्द्र गुफा, चमेरे गुफा, गुप्तेश्वर गुफा। पछिल्लो समय गुप्तेश्वर गुफालाई पुननिर्माण गरेपछि यहाँ जानेको लर्को लागेको छ। कतिले यी गुफा हेरेर रमाउँछन्। कति जना गुफा हेर्न भित्र छिर्नेबित्तिकै डरले बेस्सरी कराउँदाको क्षण कसैका लागि डर त कसैका लागि रमाइलो र हाँसो पनि। एसियाकै उत्कृष्ट दशमा पर्ने पाँच तारे होटल फूलबारी रिसोर्ट फेरि चल्ने तरखरमा छ। पाँचतारे होटेल पोखरा ग्राण्डदेखि तीन सय रुपैयाँसम्ममा पाइने कोठाका होटल पनि पोखरामै छन्। भट्टीदेखि डान्स रेष्टुरेन्टको त कुरै नगरौं पोखरा ग्राण्डमै क्यासिनो पनि छ।
पर्यटकका लागि पोखरामा यति मात्रै ? यो पनि भएन भने पख्नुस्। गजल मात्र हैन दोहोरी साँझ पनि टन्नै। बिहान दुईबजेसम्म खुल्ने लेकसाइडको अक्सिजन लाउञ्ज बारमा बसेर “ह्याङ” हुनु। पैसा र पहुँच भए यौनको मज्जा पनि। सबै ठाउँमा पुग्न गाडीको सुविधा। पोखराबाटै जान सकिन्छ पदयात्रामा। गुरुङहरुको बाहुल्यता रहेका बस्तीहरु धम्पुस, घान्द्रुक, लान्द्रुक, ताङतिङ, याङजाकोट, सिक्लेसका गाउँलेहरु हुन्छन् सधैँ पाहुँनाको पर्खाइमा।
उनीहरु कहाँ गएपछि गुरुङ संस्कृतिअनुसार स्वागत पाउँदा कसको मन फुरुङ नहोला। हाइकिङ गर्दै प्रायः गाउँहरुमा पुग्ने व्यवसायी हाइकर्स क्लबका सदस्य कृष्ण रानाभाट भन्छन्, ‘गुरुङहरुको स्वागत पाउँदा मन फुरुङ हुने मात्र हैन त्यहीँ बसीरहुँ जस्तो लाग्छ।’ गुरुङ बस्तीमा पाहुना जानेबित्तिकै बुढाबुढीदेखि युवायुवती अनि बालबालिकासम्मले खादा लगाइदिएर हातमा फुल दिएर स्वागत सत्कार गर्न तछाडमछाड गर्छन्। ‘गुरुङ बस्तीमा खाने विभिन्न परिकारले गर्ने गरेको स्वागतको त कुरै नगरौं’ व्यवसायी रानाभाट भन्छन्, ‘लोकल कुखुरा र शुद्ध कोदाको रक्सी खान गरेको आग्रह त बिर्सी नसक्नुको हुन्छ।’
हुन पनि गुरुङ समुदायमा जाने बित्तिकै छाङ (जाड) र पा (रक्सी कतै कतै नारे पा पनि भन्छन् ) ले स्वागत गर्ने मात्र हैन आजभोलि त वियरसमेत दिने गरेका छन्।
तपाईंलाई लाग्ला जाँड खाने मात्रै कुरा भयो। अहिले नै यती धेरै सोच्नुभयो भने हतार हुन्छ। पोखराको पर्यटन व्यवसायमा जीवन लगाएकी व्यवसायी लक्की कार्की भन्छिन्, ‘पोखरामा पाइला पाइलामा पर्यटनको सम्भावना छ।’ उनको विचारमा पोखराको पर्यटनलाई अझ माथि उठाउन पर्यटन व्यवसायीहरु व्यवस्थित तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ। पोखरा आउने पर्यटकसँग सकेसम्म रकम असुल्नु मात्रै ठूलो कुरो होइन। उनीहरुले यहाँबाट के लगेर जान्छन् भन्ने कुरालाई बढी ध्यान दिनुपर्छ।
‘अहिले पोखरा पूरै कृत्रिम भइसक्यो। सकेसम्म नेचुरल पोखरालाई जोड दिनुपर्छ,’ लक्कीको सुझाव छ, ‘हामीले प्रशस्त होमवर्क गरेकै छैनौं।’
पर्यटकका लागि चाहिने यति धेरै कुरा। पोखराको पर्यटन व्यवसाय सक्रिय हुन थालेको छ। पोखरा आउने पर्यटकको तथ्याङ्कको ग्राफ वर्षेनी बढ्दो छ। सिजनको सुरुवातमै भए पनि, पोखराको लेकसाइडमा पर्यटक राम्रै आएका छन्। ‘पोखरा रमाइलोका लागि मात्रै हैन,’ पोखराका चर्चित युवा गायक विनोद बानिया भन्छन, ‘साँस्कृतिक पर्यटनको हिसाबले पनि पोखरा गन्तब्य हो।’ भन्छन्, ‘संस्कृतिको बारेमा अध्ययन गर्नुछ ? आउनुहोस् यही हो लेखनाथको जन्म थलो। धर्मराज थापाको हो.. हो... माले हो... हो... हरिदेवी कोइरालाको पाइन खबर... अनि झलकमान गन्धर्वको आमैले सोध्लिन् खोई छोरो भन्लिन्...गुञ्जिएको पोखराबाटै। सेताम्य हिमाल अनि सेती गल्छी हेरेर कविता फुर्न सक्छ। कञ्चन ताल हेरेर गीत लेख्ने कति हो कति।
गण्डकी प्रदेश सरकारले अहिले आन्तरिक पर्यटक भ्रमण वर्ष मनाइरहेको छ। पर्यटन मन्त्रालयले केही साताअघि मात्रै ३६ लाख रुपैयाँको बजेटमा बाँकी ६ प्रदेशमा पर्यटक बोलाउने बन्दै अभियान नै चलायो। कार्यक्रम त्यति उपलब्धिमूलक देखिएन। तर, कसैले नबोलाए पनि पोखरामा पर्यटक आएका आयै छन्।
मात्र तिनलाई सही व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। ‘देशको अवस्था सुध्रिएमा पर्यटक बढ्छन्। अहिले सिजन पनि हो। पर्यटकको आगमन ह्वात्तै बढेको छ। पर्यटनमा आश पलाएको छ,’ पोखरा पर्यटन परिषद्का पूर्व अध्यक्ष सोम थापा भन्छन्, ‘लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि हामी पनि कफ्र्यु तोडेर आन्दोलनमा लाग्यौँ। कमसेकम अब बन्द हड्ताल नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ।’
सराङकोटको डाँडादेखि प्याराग्लाइडिङमा हावामा कावा खाँदै फेवातालको छेउ खहरेमा ओर्लँदाको बेग्लै मज्जा। उड्नेहरुले त मज्जा लिने भए नै ती उडेका प्याराग्लाइडिङ हेरेर रमाउनेहरुको संख्या पनि पोखरामा बाक्लै हुन्छ। वर्षेनी हुने प्याराग्लाइडिङ प्रतियोगिताले त झन् यसको महत्वलाई उचाइको शिखरमा पु-याएको छ। पोखरामा हुने विभिन्न मेला महोत्सव, सडक महोत्सव अनि नयाँ वर्ष महोत्सवलगायतका कार्यक्रम आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउन सहयोगी बनेका छन्।
सन् २००७ मा पोखराको पर्यटन प्रमोटका लागि पहिलोपटक “पोखरा भ्रमण वर्ष” अभियान चल्यो। त्यसले पनि पोखराको पर्यटन व्यवसायलाई राम्रै फाइदा पु-यायो। अहिले पनि बुकिङ्ग राम्रो भैसकेको छ होटलहरुको। साँग्रिला, फिस्टेल, बाराही, सेन्ट्रल ईन, टेम्पल ट्रि, त्रिसरा, स्नोल्यान्डजस्ता तारे होटलहरु अब आशमा छन्, राम्रो होटेल व्यवसाय हुन्छ भनेर। शिक्षा र स्वास्थ्य का लागि पनि पोखरा उत्तिकै अगाडि। डाक्टर बन्ने हो ? मणिपाल र गण्डकी मेडिकल कलेज छँदैछ। पोखरा विश्वविद्यालय त भै हाल्यो। देशमै धेरै विद्यार्थी पढ्ने पृथ्वीनारायण क्याम्पस र ए लेभल, नर्सिङ, होटल म्यानेजमेन्टजस्ता विषयमा समेत पढाइ हुन्छ पोखरामा। पोखरा आउने धेरै पर्यटक भारतका हुन्छन्। त्यसपछि चाइनिज, अमेरिकन, कोरियन, जापनिज, बेलायती, इटालियन र इजरायली लगभग उस्तै। गोरो छालाभन्दा बढी गहुँगोरो छाला भएका पर्यटक धेरै भेटिन्छन् आजभोलि पोखरामा। नेपाली पर्यटकलाई महत्व नदिने व्यवसायीले बिजनेस दिने पर्यटक बल्ल चिनेका छन्। ‘गोरा त सिजनमा मात्रै हो। पोखराको पर्यटन धानेकै आन्तरिक पर्यटकले हो,’ व्यवसायी हरि भुजेल भन्छन्।
पर्यटन व्यवसायीहरुका अनुसार यहाँ हरेक स्तरका पर्यटक आउँछन्। एउटा पाउरोटीमा छाक टार्नेदेखि लिएर पाँचतारे होटलमा बस्नेसम्म हैसियत भएका। यसले के देखाउँछ भने नेपाल थाहा पाएका पर्यटकका लागि पोखरा सपनाको सहर जस्तै हो। किन पनि नहोस् आँखा खोलेर आँखा नचिम्लियुन्जेल हिमालै हिमाल। ‘आफूले सोचेजस्तो खाना नभए पनि सुतेको होटलको बेडबाटै हिमाल देखिने कुनै ठाउँ भए पोखरा नै होला’ जापानी कला अनुसन्धाता योको मातो भन्छिन् ‘पोखरा यति रमाइलो छ। अब दुई वर्षपछि यसै बस्ने गरी फर्कन्छु। साथीहरुलाई पनि नेपालको बारेमा भन्नेछु।’
२१ दिने अन्नपूर्ण राउण्ड पदयात्रा घटेर एक हप्तामा सीमित भए पनि पदयात्राको चार्म घटेको छैन। जानेहरु लोराङलापाससम्म, अन्नपूर्ण बेसक्याम्म, मर्दी हिमाल पदयात्रासम्म जान्छन्। अल्छि मान्ने पर्यटकहरुलाई पनि यहाँ एकदिने हाइकिङ प्याकेजहरुको व्यवस्था छ। छोरेपाटनबाट अनदुडाँडामा रहेको विश्वशान्ति स्तुप हुँदै लेकसाइड निस्कने। बेगनासबाट कोटबारी, सुन्दरीडाँडा कालिकाचोकबाट ठूलाकोट, खोलाको छेउबाट रुपाकोट, बहुमाराबाट भरपोखरी, निर्मलपोखरी हुँदै बिरौटालगायतका स्थानहरु एकदिने हाइकिङ स्पटहरु हुन्। त्यति मात्र हैन सराङकोट, नाउँडाँडा, कालिका स्थान निर्मलपोखरी, कृस्ती, काहुँ डाँडा पनि हाइकिङका लागि महत्वपूर्ण स्थानहरु हुन्। यस्ता रमणीय ठाउँहरु हेर्न जाने हैन त पोखरा ?